Qubanaha » Ra’iisul Wasaaraha oo la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway.
Ra’iisul Wasaaraha oo la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway.
May 16, 2017 - jawaab
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulan gaar ah kula yeeshay Magaalada Doha ee dalka Qatar, Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Dawladda Norwey Børge Brende, waxayna ka wada hadleen arrimo ku aadan horumarinta xiriirka labada wadan.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo heysta dhalashada Norway ayaa kulankii uu la qaatay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Norwey Mr. Børge Brende uga warbixiyey xaaladaha dalku marayo, iyo horumarada ay dawladdu ka samaysay dhanka dawlad wanaagga iyo nabad ku soo dabaalidda guud ahaan dalkeenna.
Norway ayaa ku lug laheyd muranka badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo qeyb ka aheyd qorshaha shidaal baarista ee badda, waxaase la ogeyn in Ra’iisul Wasaaraha oo qudhiisa saami ku lahaa shirkadda Soma Oil and Gas in arrimaha ay wada hadleyn uu qeyb ka yahay arrimaha shidaalka Soomaaliya.